TEC ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထောက်ပံ့သူများနှင့်အတူ 1490nm DFB Coaxial Laser Diode LD - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > Coaxial pigtailed လေဆာ diodes > TEC နှင့်အတူ 1490nm DFB Coaxial လေဆာ Diode LD
TEC နှင့်အတူ 1490nm DFB Coaxial လေဆာ Diode LD
TEC နှင့်အတူ 1490nm DFB Coaxial Laser Diode LD LD သည် linear fiber optic link များအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။ မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုအတွက်အပူစွမ်းအင်သုံး Cooler (TEC) ဖြင့်အေးခဲစေနိုင်သည်။ DFB လေဆာသည် CATV၊ ရှေ့ပြေးပုံစံဒီဇိုင်းများ၊ ကြိုးမဲ့နှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် application များ၏သမိုင်းကြောင်းရှည်လျားသည်။ TEC နှင့်အတူ 1490nm DFB Coaxial Laser Diode LD TEC ကိုအရွယ်အစားသေးငယ်သည့်ပေါင်းစပ်တပ်ဆင်မှုတစ်ခုတွင်အတူတကွသိုလှောင်ထားပြီးမော်နီတာဖိုဒီဒီဒီဒီနှင့်အထီးကျန်သူအမျိုးမျိုးနှင့်အတူအမျိုးမျိုးသော transmitter မ်ားဖွဲ့စည်းမှုတွင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိနိုင်သည်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ optical fiber နှင့် pin definition တို့၏အရှည်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ output output ကို 1MW, 1270nm ~ 1610nm CWDM လှိုင်းအလျားကနေရရှိနိုင်ပါသည်။
TEC နှင့်အတူ 1490nm DFB Coaxial လေဆာ Diode LD ၏ 1. အကျဉ်းချုပ်
TEC နှင့်အတူ 1490nm DFB Coaxial လေဆာ Diode LD ၏နိဒါန်း
TEC နှင့်အတူ 1490nm DFB Coaxial လေဆာ Diode LD ၏ 3. အင်္ဂါရပ်များ
တစ်ခုတည်းသော Mode ကိုဖိုင်ဘာ Coupled;
မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရသော, Long ကစစ်ဆင်ရေးဘဝ;
built-in PD, TEC optional;
အဆိုပါ Pulse mode ကိုသို့မဟုတ် CW mode မှာလည်ပတ်။
TEC နှင့်အတူ 1490nm DFB Coaxial Laser Diode LD ကိုအသုံးပြုခြင်း
Data Signal ၏ Optical Transmitter;
TEC နှင့်အတူ 1490nm DFB Coaxial Laser Diode LD ၏ 5. Electro-Optical လက္ခဏာများ (T = 25â„)
အလယ်လှိုင်းအလျား အိုင်စီ CW, PO = PF 1487 1490 1493 nm
အမှားခြေရာခံခြင်း TE im = အမြဲတမ်း & အကယ်၍ = Ith + 20mA -1.5 - 1.5 dB
TEC နှင့်အတူ 1490nm DFB Coaxial Laser Diode LD ၏ထုပ်ပိုးပုံနှင့် PIN-OUT အဓိပ္ပာယ် (ယူနစ် - မီလီမီတာ) ။
TEC နှင့်အတူ 1490nm DFB Coaxial Laser Diode LD ပို့ဆောင်ခြင်း၊ သင်္ဘောတင်ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း
hot Tags:: ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကား၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်၊ အမြောက်အများ၊ တရုတ်၊ တရုတ်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သည်၊ စျေးပေါ၊